‘बद’नाम’ जङ्गबहादुरका पनि यस्ता थिए देशभक्तिका कदमहरु : – Sadhaiko Khabar
‘बद’नाम’ जङ्गबहादुरका पनि यस्ता थिए देशभक्तिका कदमहरु :
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आश्विन २८, २०७८ समय: १७:४३:०३
काठमाडौं / १८ औं शताब्दीको अन्ततिर फ्रान्सेली क्रा’न्तिपछि औद्योगिकिकरणको सम्हाल्नै कठिन वेगमा बढिरहेको थियो । उद्योगको उत्पादन विक्रीका लागि आवश्यक बजार र वस्तु उत्पादनको आवश्यक कच्चा पद्धार्थको आपूर्ती सहज बनाउन सा’म्राज्यवादी हा’वी हुँदै थिए । यूरोपका श’क्तिशाली देशहरू वि’श्वभर सा’म्राज्य विस्तार गरिरहेका थिए । फ्रान्सेली अफ्रिकामा, स्पेनिस दक्षिण अमेरिकामा र बेलायतीहरू एशिया र उत्तर अमेरिकामा क’ब्जा जमाउँदै थिए । ठिक त्यही समयमा नेपालको शा’सन स’त्तामा जङ्गबहादुर राणाको उदय भयो ।
बेलायतको भारतवर्षमा ए’कछत्र क’ब्जा बनिसक्दा उनले कुटनी’तिक र रणनी’तिक चा’र्तुयता देखाएर देशको अस्ति’त्व जोगाए । बेलायतसँग नि’कट सम्बन्ध बना’एकैले पश्चिमा जगतमा शा’सकका रूपमा बलियो परिचय स्थापित गर्ने पहिलो नेपाली हुनपुगे । बेलायत सरकारको औ’पचारिक भ्रमणको नि’म्तो पाए । दक्षिण एशियाका शा’सकहरूमध्येबाट बेलायतको औपचारिक भ्रमण गर्ने पहिलो शासक बने । १९ औं शताब्दीका बलियो शा’सकका रूपमा उनको परिचय स्थापित छ ।
पश्चिमी देशहरूसम्म उनको चर्चा चल्यो । भलै कार्ल माक्र्सले जङ्गबहादुरलाई ‘बेलायतको बफादार कु’कुर’ भनेका हुन् । बेलाय’तकी चर्चित सुन्द’री लौरा वेलसँग पनि जोडिएकाले जङ्गबहादुरको बेलायत यात्राले झनै महत्व पायो । नाम होस् या बद’नाम जङ्गबहादुर विगत देखि वर्तमानसम्म गु’मनाम छैनन् । एउटा क्रु’र र सफल शा’सकको परिचय स्थापित गरेर गए ।
जङ्गबहादुर नभएको भए पक्कै पनि अर्को बहादुर नेपालको प्रधानमन्त्री बन्थ्यो । तर नेपालको नक्शा बदल्न सक्थ्यो सक्थेन ? राजनीतिक दा’उपेच र धूत्र्या’इबाट श’क्तिमा पुगेका उनले कूटनी’तिक चा’र्तुयद्वारा देशको अस्ति’त्व जोगाए । एशियाभर बे’लायती सा’म्राज्य फैलिइरहँदा बाह्य विश्वको राजनीतिक परिस्थिति बुझेर उपयुक्त कदम चाल्दै गुमेको भू–भाग फर्काए ।
नयाँ मुलुकको परिचय पाएको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर अंग्रेजबाट फि’र्ता ल्याए । पहाडलाई कुहि’नोले ठे’लेर हल्ला’उन नस’किने यथार्थलाई म’नन गरेर बेलायतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर सत्तामात्र टि’काएनन् । बाह्य विश्वमा नेपालको परिचय दिलाए ।
वर्तमानको चश्माले हेर्ने हो भने जङ्गबहादुर क्रु’र ता’नाशाही शा’सक हुन् । उनले सत्तामा पुग्न धेरैको निर्म’मतापूर्वक ह’त्या गरे । सत्या ब’चाउन विप’क्षीहरूको सफा’यालाई निर’न्तरता दिए । विरो’धीहरूलाई बाँकी रा’खेनन् । विगतको चश्माबाट हेर्दा जङ्गबहादुर परिस्थितिले जन्माएको शा’सक हुन् । देशभित्र बढ्दो अ’स्थिरता, दरबारभित्रको गु’ट उपगु’टको वि’वादका अलावा बाह्य ह’स्तक्षेपको बढ्दो सम्भावनाबीच क’ठोर शा’सक बनेर उदाए ।
राष्ट्रिय अख’ण्डता र सा’र्वभौमिकता बचाउनुपर्ने चुनौ’ती आइपर्दा उनको उदय भयो र देशको अस्ति’त्वलाई सफलतापूर्वक बचाए । प्रशासनिक र सामाजिक परिवर्तनमा ध्यान दिएकाले का’नुनी प्रणाली बदल्ने शा’सक मध्येका हुन् । देशमा बेलायतको जस्तो का’नुनी शा’सनको प्रारम्भ गर्न मु’लुकी ऐ’न ल्याए ।
बाह्य विश्वसँग बलियो गरी सम्बन्ध स्थापित गरे, सामाजिक परिवर्तनमा पहल थाले र बाह्य विश्वले प्रयोग गर्दै आएको प्रविधि देशमा भित्राउनमा यो’गदान दिए । उनले चालेका कद’महरूलाई केलाउँदा रणनीतिक कौ’शल मात्र नभई दुरदृ’ष्टि समेत भेटिन्छ । परिव’र्तनका लागि काम गरेर देखाए ।
नेपालको इतिहासका अविस्म’रणीय पात्र जङ्गबहादुरको जन्म १८ जून सन् १८१६ मा काठमाडौंमा भएको थियो । वास्तविक नाम वीरनरसिंह कुँवर भएपनि मामा माथवरसिंह थापाले जङ्गबहादुर नाम राखिदिएका थिए । भाञ्जा बहादुर यो’द्धा बनुन् भनेर नाम जु’राएका थिए । मामाले जस्तो नाम राखिदिएको त्यस्तै भए ।
जङ्गबहादुर राजनीतिका च’तुर खे’लाडी बनेर नि’स्किए । मामाबाट राजनीतिक चा’र्तुयता सिके । राजनीतिक सफलताका लागि आफ्नो र अर्काको समेत नभनी काम गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने मामाले भाञ्जालाई सम्झाएका थिए । माथवरसिंह प्रधानमन्त्री बनेपछि राजनीतिक प्रति’ष्पर्धी पाँडेहरूको सफा’यामा स’क्रिय भए । त्यस क्रममा आफन्त थापाहरू समेत का’रबाहीमा परे ।
जङ्गबहादुरले सोधे– मामा आफन्तलाई किन कारबाही गरेको ? मामा माथवरले ग’म्भीर उत्तर दिएका थिए– भाञ्जा राजनी’तिमा आफ्नो र अर्काको नभन्ने अवस्था पनि आउँछ । भोलि गएर तिमीलाई मैंले र मैंले तिमीलाई मा’र्ने अवस्था आउन सक्छ । मामाको यही राजनीतिक सूत्रलाई दि’मागमा घुसा’एर स’त्ताको सिं’ढी च’ढे । राजनीतिक षड्य’न्त्रमा प्रत्य’क्ष संलग्न भएर मामाको समेत ह’त्या गरेको दा’बी एकाथरी इतिहासकारहरूको छ । राजनीतिक खि’चातानीको भरपूर फा’इदा उठाए ।
जङ्गबहादुरका बाबु बालनरसिंह कुँवर दरबारमा कार्यरत थिए । रणबहादुर शाहलाई उनका सौ’तेनी भाई शेरबहादुर शाहले ह’त्या गर्दा बालनरसिंह प्रत्य’क्षदर्शी थिए । राजाको ह’त्यालगत्तै उनले शेरबहादुरलाई त्यहीं मा’रिदिए । कदरस्वरूप बालनरसिंहले का’जीको उ’पाधी पाए । बाबु का’जी हुनु र मामा शक्तिशा’ली पदमा हुनुले जङ्गबहादुरले नजिकबाट राजनीतिलाई बुझ्न र सिक्न पाए । थापा खलकसँग सम्ब’न्ध हुनुको फा’इदा मात्र भएन बेफा’इदा पनि भयो । भीमसेन थापाको प’तनका कारण जा’गिरबाट हात धुनुप¥यो ।
पाँडेहरूले थापा प’क्षलाई छानी छानी ठेगान लगाउँदा कलिलो उमेरका जङ्गबहादुरको जा’गिर खो’सियो सम्पत्ति ह’डपियो । मह’त्वाकांक्षा बो’केर १६ वर्षको उमेरमै से’नामा भर्ती भएका थिए । जागिर खो’सुवाले उद्दे’श्यमा नरा’म्रो ध’क्का लाग्यो । केही वर्ष देश छा’डी भारततिर भौ’तारिए । मामा माथवर पनि उतै थिए ।
दरबारमा पाँडेहरू क’मजोर बन्दै गए । च’तुर र बहादुर जङ्गबहादुरलाई युवराज सुरेन्द्रको अ’ङ्गरक्षक बनाइयो । भा’वी राजाको अ’ङ्गरक्षक हुनुको भर’पूर फाइदा उठाए । काजीको उपा’धी पाए । मामा माथवर श’क्तिमा आएपछि जङ्गबहादुरको दिन दु’गुना रा’त चौ’गुना प्रगति हुनथाल्यो । भाञ्जाको महत्वा’कांक्षा देखेर मामा समेत स’चेत र श’तर्क भए ।
दरबारभित्र चु’लिएको श’क्तिसंघर्षमा एकले अर्कालाई सि’ध्याउने क्र’म चल्दै थियो । राजा राजेन्द्रकी प्रीय रानी राजेन्द्रलक्ष्मीको महत्व’कांक्षा पूरा गर्न रो’क्न भाइभारदारहरू प’क्ष र विप’क्षमा उभिए । एक अर्कावि’रूद्ध षड्य’न्त्रहरू भए । जङ्गबहादुरले मौकाको फाइदा उठाउँदै प्रतिष्प’र्धीहरूलाई सखा’प पार्ने रण’नीति बनाए । धेरैको र’गत ब’गाएर स’त्तामा पुगे । सन् १८४६ को को’तपर्वमा विरो’धीलाई सखा’प पारेर श’क्तिमा पुगे । रा’णाशासनको वी’जारोपण गरी राजालाई दरबारको चार कि’ल्लामा सि’मित राख्ने यो’जना बढाए ।
जङ्गबहादुरले ख’तरनाक षड्य’न्त्रलाई चि’र्दै राजनी’तिक सफलता हात पारे । राजा राजेन्द्र र रानी राजेन्द्रलक्ष्मीलाई निर्वा’सनमा पठाए । युवराज सुरेन्द्रलाई राजा बनाएर आफ्नी छोरीहरूसँग युवराज त्रैलोक्यवीरविक्रम शाहको विवाह गराए । सुरेन्द्रका दुई छोरीहरूको आफ्ना दुई छोराहरूसँग विवाह गराएर पारिवारिक सम्ब’न्ध बलियो बनाए । राजेन्द्रलाई प’क्राऊ गरी कारा’गारमा राखे । कारा’गारमै राजेन्द्रको नि’धन भयो ।
रानीको आफ्नो छोरालाई राजा बनाउने उद्देश्य असफल बनाएर नियमानुसार जेठा सुरेन्द्रलाई राजा बनाएर थि’तीलाई निरन्तरता दिन सफल भए । राजालाई निकै खुशी बनाएर प्रधानमन्त्री पद आफ्नै वंशमा रहने व्यवस्थालाई सदर गराउन सके । देशको सेना र प्रशासनमा राणाहरूको एकछत्र राज शुरू गरे ।
भारतभर सा’म्राज्य बलियो बनाउँदै लगेको ब्रिटिश कम्प’नि सर’कारविरूद्ध वि’द्रोहहरू भइरहन्थे । जङ्गबहादुरका लागि अंग्रेजलाई खुशी बनाउन उपयुक्त मौ’का बन्यो । सन् १८५७ को सि’पाही वि’द्रोह ड’रलाग्दो बन्यो । जङ्गबहादुरले वि’द्रोहीलाई नभई अंग्रेजलाई साथ दिए । से’ना पठाए । पछि स्वयं युद्धमा सहभागी भएर सिपाही वि’द्रोह द’बाए । भागेर लु’केका वि’द्रोहीलाई समेत खोजी खोजी ठेगान लगाए । लखनऊसम्म पुगेर वि’द्रोह द’बाउन ख’टिएको सै’न्य टोलीको नेतृत्व आ’फैले गरे ।
सन् १८१६ मा भएको सुगौली स’न्धीताका गुमा’इएको भू–भागमध्ये चारवटा जिल्ला फिर्ता लिन सफल भए । अंग्रेजहरूले जङ्गबहादुरलाई भ्रमणको निम्तो गरे । सन् १८५० को अप्रिलमा कलकत्ता हुँदै बेलायत पुगे । त्यहाँको विकास र प्रगतिबाट प्रभावित भए । फ्रान्स पनि पुगे । तर एशियाली देशहरूमा बेलायती प्रभावबारे जानकार भएकाले बेलायतसँगै सुमधुर सम्बन्ध बनाउने नि’धो गरी फर्किए ।
आफूसँग बेलायत गएकाहरूलाई त्यहाँको विकास, का’नुन र प्रशा’सनबारे सिक्न लगाए । देश फर्किएर का’नुनमा आ’मूल परिवर्तन ल्याए । उनकै योगदानका कारण सन् १८५४ मा मुलुकी ऐ’न बन्यो । त्यसअघि १७ औं शताब्दीको रामशाहकालिन का’नुन चल्थ्यो । मुलु’की ऐ’नले परिवर्तित समाज अनु’कूलका का’नुन त’र्जुमा गरी का’र्यान्वयनमा ल्यायो ।
जङ्गबहादुर पश्चिमाहरूको विशेष चा’सोमा परेको पहिलो नेपाली शा’सक हुन् । दक्षिण एशियाली शा’सकहरूमध्येबाट औ’पचारिक नि’म्तो पाएर बेलायत पुग्ने उनी पहिलो हुन् । सन् १९५०–५१ को बेलायत यात्राका क्रममा उनले ब’लियो प्रभाव देखाए । कार्ल माक्र्सले उनको क’डा आ’लोचना गर्दै ‘बेलायतको वफादार कु’कुर’ भनेका छन् ।
बेलायत यात्राका क्रममा जङ्गबहादुरको शा’न र ऐ’यासी जी’वनयापनबारे धेरै उल्लेख पाइन्छ । तीन महिना बसा’ईंका क्र’ममा रानी भिक्टोरियासँग भेटे । त्यहाँका उ’च्च पदस्थ अधिकारीसँग भे’ट्नुका साथै उनको स्वागतमा भ’व्य कार्यक्रमहरू राखिए । बेलायतमा खूबै म’स्ती गरे । सुन्दरी लौरा वेलसँगको प्रे’म र यौ’न सम्बन्ध इतिहासमा सुरक्षित छ । लौ’राको नाम बेलायतका श’क्तिशाली व्य’क्तिहरूसँग जो’डिएको छ । जसमध्ये तत्कालिन बेलायती प्रधानमन्त्री ग्लाडस्टोन पनि छन् ।
जङ्गबहादुरले लौराको लागि साढे दुई लाख पाउण्ड खर्च गरे । मह’ङ्गो उपहार दिए । उनीसँग नजिकिएर बसाईं ल’म्बाउन खोजे । तीन महिना बेलायत ब’साईं नलम्बा’उन साथमा गएका भाईहरू जगत शमशेर र धीर शमशेरले देशमा हुनसक्ने रा’जनीतिक षड्य’न्त्रतर्फ ध्या’नाकर्षण गराउँदै फर्कन सम्झाएका थिए ।
जङ्गबहादुर शा’सनमा हुँदा नेपाल भ्रमण गरेका रूसी नागरिक मिनाएभले जङ्गबहादुरको मुहारमा पा’शविकताको कुनै ल’क्षण नदेखिने वर्णन गरेका छन् । मीठो बो’ल्ने र भेटेको व्यक्तिलाई प्रभाव पारिहाल्ने क्षम’ताका थिए । त्यतिबेला ५० वर्षका जङ्ग वास्तविक उमेरभन्दा क’म र फू’र्तिला देखिन्थे । मङ्गोलियन अनु’हारका उनी मिलनसार र बो’लक्कड रहेको उल्लेख गरेका छन् । जीवन रहेसम्म प्रधानमन्त्री बनेका जङ्गबहादुरले सन् १८४६ देखि १८७७ सम्म शा’सन गरे ।
बीचमा केही समय भाई बमबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएपनि श’क्तिको साँचो उनैको हातमा थियो । भीमसेन थापापछि सबैभन्दा लामो समयसम्म शा’सन गर्ने शा’सक उनै हुन् । दक्षिण एशियाका बलि’या देशहरू ब्रिटिश साम्रा’ज्यको पक’डमा पर्दै गर्दा उनले देशको स्वत’न्त्रतालाई जि’वित राखे । चाहे उनले बलायतीको गुला’मी नै किन नगरेका होऊन् । ल’डेर देशको भू–भाग गुमाउनुभन्दा धरातलीय यथार्थलाई बुझेर रणनीति चाले ।
नेपालको प्रशासनको आ’धुनिकिकरण गरेर पुरानो ऐ’नमा परिवर्तन ल्याए । स’तीप्रथा उ’न्मूलनमा जङ्गबहादुरले प्रयास गरे । स’तीप्रथामा केही प्रतिब’न्ध लगाए । सदीऔंदेखि चलिआएको स’तीप्रथा उ’न्मूलनको प्रयास गर्ने उनको प्रयास ऐ’तिहासिक बन्यो । नेपालको सामाजिक परि’वर्तनमा जङ्गबहादुरको यो’गदान अविस्म’रणीय रहेको छ ।
नेपालको इतिहासको कोर्स बदल्ने जङ्गबहादुरको २५ फेब्रुअरी सन् १८७७ मा पत्थर घट्टामा आ’कस्मिक नि’धन भयो । उनको मृ’त्युको कारणबारे रह’स्य का’यम छ । तर त’थ्य फे’ला परेको छैन । स’तीप्रथा उ’न्मूलनको प्रयास बा’बजुद उनका ती’नजना वि’धवाहरू स’ती गए । जुन उनको प्रयासमाथिको ध’क्का थियो । दिपेश केसी / रिपो’र्टर्स नेपा’लबाट ।